I-Nhl | June 2022
ICandelo elitsha le-NHL laseCanada-kuphela linika uBukhosi obuDilikayo uMlenze phezulu
Emva kotshintsho olunxulumene nendyikityha yokufa, iiklabhu zaseHockey zaseCanada ngoku zinethuba elikhulu lokuphelisa imbalela yeStanley Cup yeminyaka engama-27
IiBruins vs Blues: Yonke into ekufuneka uyazi malunga neNdebe yokuGqibela yeStanley
Ukusuka ku-Big Z ukuya ku-'Gloria, 'nantsi into yokuqala kwimigca yamabali amaninzi kumdlalo ophindaphindwayo kuthotho lwee-1970 ezazinomfanekiso kaBobby Orr
UAuston Matthews kunye noConnor McDavid banokuthi ekugqibeleni babe kwiKhosi yeKhosi yePlayoff
Umdlali obalaseleyo we-NHL kwaye mhlawumbi kubaluleke kakhulu ekugqibeleni angahlangana kwi-postseason kulo nyaka kwaye asinike ukuboniswa kweGretzky-Lemiuex esingazange sibe nayo
I-2017-18 yeNHL yePlayoff Superlatives
Abadlali ababini abanomdla wokudlala emva kwexesha lonyaka, i-juggernaut yokwandisa, kunye ne-goalie yokuqala eyothusayo iphakathi kwamabali amabali aphambili angena kwixesha lokuzonwabisa leHockey
Abantu abali-16 ekufuneka beBukele kwi-2021 yeNHL Playoffs
I-Puck yehla kwi-NHL postseason ngoMgqibelo, kwaye aba ngabadlali, abaqeqeshi, kwanamagqirha-elinye kwiqela ngalinye-ukukhangela njengoko umjikelo wokuqala uqala
Ngaphandle koBlue: ISt
Iqela le-NHL lokugqibela ekupheleni konyaka, iiBlues zalwa zaya kumdlalo wokudlala, apho zathintela bonke abachasi ukuba baphelise iminyaka engama-52 yobungqwele.
Wamkele iSlimy Tentacle yaseSeattle Kraken, iNHL eNtshutshiso eNtsha yoNzulu
Elona qela lezemidlalo libalaseleyo kwiminyaka sele likhutshiwe
Ngaba iVegas Golden Knights 'Impumelelo sisiphumo se-GM's Shrewd Moves, okanye i-NHL yokuLungiswa?
I-Knights isuka kulwakhiwo lwabaqulunqi ukuya kubadlali abakhuphisanayo phakathi kweenyanga ezili-10 - kodwa ngaba yayiyindlela yabo yobuqili ye-GM okanye ulungiso lwe-NHL olubafikise apho?
Uphando lokungena kwi-NHL
Ngaba lonke icandelo laseCanada linokwenza ingxolo emva kwemidlalo? Ngubani oza kukhanya ngokuqaqambe kumjikelo wokuqala? Kwaye leliphi iqela eliya kuthi ekugqibeleni ligoduke neNdebe yeStanley? Oko nangaphezulu kuvavanyo lokungena kwabasebenzi.
I-Grit, iGrudges, kunye ne-Gurus: Yintoni enokwenziwa ngeVeki yokuThusa iRanger, kunye neKamva leQela
UJames Dolan wothuse ilizwe leHockey kule veki ngokudubula abaphathi bakhe abathandayo abaphambili. Kwaye nangaphambi koko, iRanger yenza izihloko zeNgxelo. Ivelaphi yonke le nto-kwaye iqela lisuka phi apha?
UHenrik Lundqvist Uyaqhubeka, kodwa Uya kuhlala enguKumkani eNew York
Owayekade engunozinti weRanger wachitha isivumelwano sonyaka omnye neeKapitali ngolwe-Sihlanu-kodwa ngelixa ukufuna kwakhe iNdebe kuya kuqhubeka eWashington, uyakuhlala ethandwa ngabantu abathembekileyo baseNew York
Amanqwanqwa angenakuphepheka-oonombombiya abaphambili kolu chungechunge abuye aba phezu kwethu
Njengoko aba badlali babini badibana kwi-postseason okwesihlandlo sesine, abalandeli abachasayo bacinga ngohlobo lwamva nje lwe-matchup-kwaye ukuba iWashington ingoyisa iPittsburgh
Iiphengwini vs Iiflaya Iglosari
Onke amagama, amagama, kunye namabinzana ekufuneka uwazi ukonwabela ngokufanelekileyo lomdlalo wenqala
Oyena Mnini weFranchise yezeMidlalo imbi kakhulu kuMntla Melika useOttawa
Hambisa ngaphaya, uDan Snyder kunye noJames Dolan- xa kufikwa kubuncinci, ukubalwa kwemali, i-moxie engenazintloni, kunye nokuphathwa kakubi kweqela, umnini we-Ottawa Senators u-Eugene Melnyk unokuba ngoyena mtshabalalisi we-franchise kwilizwekazi.
Ukudutyulwa kukaDon Cherry Kwadlula Kade—kodwa Iingxaki Ayezimela Zihleli
Owayesakuba ngumsasazi we-Sportsnet unembali yamashumi eminyaka yamagqabaza anentiyo malunga nabaphambukeli. I-tirade yakhe yangoMgqibelo yamlahlekisela umsebenzi wakhe, kodwa ukugxothwa kukaCherry akuzukulungisa ucalucalulo lwezemidlalo, ucalucalulo ngokwesini, kunye nokungasebenzi kakuhle kodidi.
Ngaba uTyler Seguin kunye neNkwenkwezi bangayifumana indlela yabo yokuBuyela kumdlalo wokuGqibela weNdebe yeStanley?
IDallas ibinamandla kuyo yonke le playoffs, kodwa kwimidlalo embalwa edlulileyo, iinkwenkwezi ezifana noSeguin noJamie Benn ziye zathula. Ngaba baya kukwazi ukufumana indlela yabo ngexesha lokufumana i-teardrops kwiiciga zabo?
Ikamva elingaqinisekanga: Umhlalaphantsi kaRick Nash kunye nengxaki yokuNxibelelana eqhubekayo ye-NHL
I-6-time All-Star yabiza i-34 yobudala ngenxa yeempawu ezinxulumene ne-concussion kwiinyanga ezimbini emva kokuba i-NHL yavuma ukuhlawulela abadlali be-318 ababekade bemangalela ngenxa yokulimala kwentloko. Ngaba iligi yenza ngokwaneleyo ukuqinisekisa impilo yexesha elide yabadlali bayo?
Imiboniso evela kuMtshato (owaphukileyo): Indlela uJack Eichel kunye neeSabers abahlukana ngayo
Inombolo yangaphambili. Umsebenzi we-2 wokukhetha e-Buffalo waqala ngokuphulukana, kwaye izinto ziye zehla ukusukela oko. Kwenzeka njani ukuba izinto zibembi kangaka?
Yamkela isiphithiphithi: I-NHL Playoffs i-First-Round Exit Survey
Iitshayela ezothusayo. Umdlalo wamaqhawe esi-7. Iingxaki zokuqhawula isibiyeli. Iminxeba ephikisanayo kunye neefisticuffs. Umjikelo wokuvula wasendle we-hockey postseason ubenayo yonke into, kwaye sizama nje ukwenza ingqiqo yayo yonke.
Umatshini waseRashiya uAlexander Ovechkin Akakaqhawuki
Ngoku kwisizini yakhe ye-13, ugqirha wezilwanyana oneminyaka engama-32 ubudala ulobe iimayile ezininzi emkhenkceni kunye neWashington Capitals nakwinqwelomoya ebuyela ekhaya eMoscow. Kodwa nangona kukho impikiswano yamazwe ngamazwe kunye nohambo olungenakuphepheka lwexesha, ulawula njengakuqala.
U-elias ronnenfelt isibhakabhaka ferreira
meme yonyaka ka-2017
Umphathi wenqaku lomnxeba
umdlalo wetrone weetrone
Okona kukhaba kubi kwi-nfl
Ifilimu yabantu abadala ebalaseleyo ngo-2016